Na-eweta nchịkọta Enterprise na WordPress | Martech Zone
Thursday, January 14, 2010 Fraịdee, Nọvemba 2, 2012 Douglas Karr
N'ihi na nke ikpeazụ di na nwunye ọnwa, M na-arụ ọrụ na a n'elu nzuzo oru ngo na bụ ezigbo fun. Webtrends bụ a ahịa nke m na anyị na-enyere na mbenata na-eri kwa ndu, ịba ụba akakabarede udu na rụọ online visibiliti (Amaara m na nke ahụ bụ generic… ma ndị a na-na a ukwuu asọmpi ahịa!). Site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụlọ ọrụ azụmaahịa na-eji WordPress, ọ bụ ihe ezi uche dị na Webtrends ga-eweta onyinye jikọtara ọnụ… yabụ anyị wuru ya.
Webtrends ngwa mgbakwunye abụghị naanị obere obere ihe mgbakwunye ịgbakwunye gị nchịkọta Kọọ na ụkwụ gị - nke ahụ gaara adị mfe. Kama nke ahụ, anyị wetara Webtrends dị egwu nchịkọta n'ime WordPress dashboard!
Ihe oru ngo a nwere nsogbu! Mgbe Webtrends API bụ otu n'ime ihe kachasị mma m tinyegoro (pịa bọtịnụ na ngwa nyocha gị iji nweta ya API Kpọọ!), Na-anwa ịnye interface njirimara pụrụ iche nke dabara na WordPress siri ike mana echere m na anyị kpọgidere ya. Enwere ntọala peeji ebe ị mejupụtara nke gị API nkọwa ma họrọ akaụntụ gị…. ma ị na-agba ọsọ!
Dashboard bu kwa 100% Ajax na-ebughari iji hụ na oge ejiri peeji nke pere mpe. Ọ bụ ihe ọ joyụ ịrụ ọrụ site na WordPress 'Ajax nche nlereanya (ntakịrị okwu mkparị n'ebe ahụ, mana m ghọtara mkpa ọ dị inwe ezigbo!).
Ọ bụrụ na ị na-na na a Webtrends ahịa na ga-amasị beta ule na anyị, biko mee ka m mara. Ihe nkesa gị ga-agba ọsọ PHP 5 + na ọbá akwụkwọ cURL nyeere ya aka API enwere ike weghachite oku! Anyị ga-ekwu okwu banyere ngwa mgbakwunye na Tinye 2010!
Melite: Echefuru m ikwu ya Ole Laursen nyekwara otu egwuregwu aka. Ole nyere anyi aka itinyekota FLOT nke oma na ngwa mgbakwunye. FLAT bụ mmeghe-emeghe Jquery dabere na engine charting bara ụba. O wutere m na echefuru m banyere Ole! Ọ dị ebube ịrụ ọrụ.
Tags: webụsaịtịwebtrends wordpresswordpress plugin
Doug - nke a dị mma - eme ya nke ọma
ọ ga-amasị gị ịnwale ngwa mgbakwunye ahụ mgbe ọ dị
Jenụwarị 14, 2010, elekere 3:08 nke abalị
Daalụ Paul! Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ… ọtụtụ ohere ịga n'ihu na-akwalitekwa. Webtrends nwere API dị ukwuu, o mere ka ọ dịkwuo mfe. Akụkụ kacha sie ike bụ ịmepụta eserese mmekọrịta (ị nwere ike ịmegharị isi ihe). 😀
Ọrụ na-enweghị atụ. Nhazi/ihe ngwọta a dị nnọọ akọ. Enweghị ike ichere ịnwale ya.
Ọ ga-amasị m ịnye ngwa mgbakwunye wordpress gị nwaa. Enwere m blọọgụ ọtụtụ. Na-enwe mmasị mgbe niile maka ihe ọhụrụ. Abụghị m onye ahịa mana ahụrụ m post na blọọgụ ha na-ekwu na enwere m ike ịhapụ gị ikwu ebe a ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale ya. Naanị mee ka m mara.
Feb 15, 2010 n’elekere 5:28 nke abali
Aha m bụ Vittorio,
M na-arụ ọrụ na Ịtali maka ENEL ụlọ ọrụ eletrik na-arụkọ ọrụ na webtrends na anyị ga-enwe mmasị ije ozi dị ka ule beta.
kedu ka m ga-esi mee nke a?
Ọ ga-amasị m ileba anya na nkwụnye ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-enwe obiọma. Enwere m ụfọdụ ndị ahịa na-agba ọsọ WebTrends na WordPress ga-amasị ya. Ọ dị maka nbudata ebe?
Nke a dị oke mma. Enwere m oru ngo na-agba ọsọ na WordPress nke na-achọkwa WebTrends, ọ ga-ekwe omume ibudata ngwa mgbakwunye a?
Nke a dị oke mma. Ị ka na-achọ ndị ga-anwale nkwụnye ahụ? Ọ ga-amasị m ịnwale ya na ntinye WordPress MU anyị.
Mwekota na-ele anya nke ukwuu. Anyị (na ramboll.com) ga-amasị anyị inwe ike ịnwale ya. Anyị nwere blọọgụ n'ime firewall ugbu a, mana anyị na-ewepụta blọọgụ mpụga n'ime abalị abụọ. Ọ nwere ebe ọ bụla anyị nwere ike ibudata ya, ma ọ bụ na ị nọ nso na-ewepụta nke ikpeazụ?
Nke a dị mma! Ọ ga-amasị m ịnwale beta. Enwere m ọtụtụ saịtị anyị na-eji webtrends soro.
Ọ na-amasị m ịgụ akụkọ ndị dị na blọọgụ a. Edemede dị ụtọ nke ukwuu. Enwere m ekele maka ọkwa a magburu onwe ya
Hi Doug – Enwere m mmasị na ngwa mgbakwunye gị. Ị ka na-emepụta ihe a? Ọ nọ na ebe nchekwa ngwa mgbakwunye WordPress? O siri ike ịkọ otú isiokwu a dị ugbu a ebe ọ bụ na ọ dịghị ụbọchị, ma m na-atụ anya na nke a bụ ngwa mgbakwunye ugbu a na ị ka na-akwado. Ozi ọ bụla bụ enyemaka - daalụ n'ọdịnihu!
Sep 18, 2015 na 10: 52 AM
Heather, chọpụtara na ị bụ okwu kacha nso nso a. Ị nwere ike nweta ozi ọ bụla gbasara ngwa mgbakwunye a?
Sep 18, 2015 na 10: 51 AM
Doug, enwere mmelite ọ bụla na ngwa mgbakwunye a? Anyị na-emepe emepe ihe yiri nke ahụ, amaghị ma ị na-enye ya n'ihu ọha ma ọ bụ ọbụna maka ire ere.
Septemba 18, 2015 na 12:38 ehihie
Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta WordPress, ọ ga-amasị m n'eziokwu itinye gị dị ka onye ode akwụkwọ wee weghara ya!